इटहरी आन्दोलनको रिमोट जेनियल होटेलमा !आन्दोलन खर्च ‘रअ’बाट उपलब्ध! | Canadian Reporters
Posted on August 12, 2015 , updated on August 12, 2015 by क्यानेडियन रिपोटर्स
पूर्व रअ प्रमुख डा. आरपी सिंह साउन १ देखि नै जेनियलमा
आन्दोलनमा लाग्ने खर्च ‘रअ’बाटै उपलब्ध
१०३ नम्बर कोठामा बन्छ ‘भड्काउ योजना’
काठमाण्डौ । इटहरीमा विगत लामो समयदेखि हिन्दूवादीहरुको आन्दोलन चर्किरहेको छ । पहिला शान्तिपूर्ण र मर्यादित रुपमा संचालित आन्दोलन दिनप्रतिदिन उग्र र उत्तेजित बन्दै गएको छ । आन्दोलनकारीले गाडी तोडफोड गरेका, राजमार्ग १५ मिनेट पनि बन्द गर्न नदिने सरकारको नीति उल्लंघन गरेका, चौकक्षेत्र जाम गरी व्यापार÷व्यवसाय चौपट पारी अन्यलाई सकस दिएका लगायतको दाबी गर्दै प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि लाठी पनि उसैगरी बर्साइरहेको छ । दिनहुँजसो इटहरीमा हिन्दूवादी र प्रहरीबीच झडप भइरहेको छ । यो क्रममा दिनहुँ सर्वसाधारणको टाउको फूटिरहेको छ भने धनजनको क्षति भइरहेको छ । दिनहुँ इटहरी अशान्त भइरहँदा समेत यहाँका ठूला दल तथा अन्य जिम्मेवार पक्षहरु चूपचाप छन् । नागरिक समाज मौनता साँधिरहेको छ भने इटहरीबासी दिनहुँको गलफत्ती र झडपको दृश्य स्वाद फेरि फेरि हेरिरहेका छन् । हेर्दा सामान्य झै लाग्ने आन्दोलन दिनप्रतिदिन हिंसातर्फ उन्मुख भइरहँदा समेत किन यसलाई सहज बनाउने कोशिश भइरहेको छैन ? प्रहरीले लाठीमुङ्ग्री बर्साइरहँदा समेत आन्दोलन किन शिथिल भएको छैन ? प्रहरीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न दिने, तर बन्द हड्ताल गर्न चाहि नदिने भनिरहँदा आन्दोलनकारीहरु किन झन् झन् उग्र बनिरहेका छन् ? आन्दोलनका अन्य माध्यमहरुको बिषयमा आन्दोलनकारीले किन सोचिरहेका छैनन् ? आश्चर्यजनक ढंगले इटहरीको शान्तिसुरक्षा बिग्रिनुमा ठूलै शक्तिको हात रहेको तथ्य बिजशालाले फेला पारेको छ।
देशका अन्य भागमा भन्दा इटहरीमा हिन्दूवादीहरुको आन्दोलन टिकिरहनुको पछाडिका केही कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण रअको चलखेल र लगानी रहेको आशंका गर्ने आधारहरु फेला परेका छन् । हुन त आन्दोलनका अगुवाहरु यो कुरा मान्न तयार हुँदैनन्, तर भित्री रुपमा इटहरीको आन्दोलनमा भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनलाइसिस विङ(रअ)ले लगानी गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
युवासन्तको छवि बनाएका श्रीनिवासाचार्यको नेतृत्वमा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ साउन १ गतेदेखि इटहरीको खेतीखोला छेउमा संचालन भइरहेको छ । पहिला प्रचार प्रसार गर्दा ९ गतेसम्म मात्र महायज्ञ रहने भनिए पनि अहिले त्यसैको नाममा हिन्दूवादीहरुलाई भेला पार्ने र पुराण सुन्न आउनेहरुलाई आन्दोलनमा उतार्ने काम भइरहेको छ । नेपाल माता रक्षार्थ धर्म जागरण श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञको प्रचार प्रसार गर्दा यो कार्यक्रम कुनै राजनीतिक पार्टी दलहरुको नभएर सम्पूर्ण ऊँकारवादी सनातन हिन्दूहरुको प्रतिनिधि विशुद्ध साधुसन्तहरुको हो भनिएको थियो । तर आन्दोलनको भोलिपल्टदेखि नै राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आएको राप्रपा नेपाल अभियानमा जोडिएको थियो । प्रचार प्रसार गर्दा एकथोक भनेर भक्तजनलाई पण्डालमा भेला परी मीठा भजनमा लठ्याउँदै गलत ढंगले प्रयोग पो गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ । आश्चर्य त यहाँ छ कि ९ दिनसम्म मात्र हुने भनिएको कार्यक्रम २४ औ दिनसम्म आइसक्दा समेत कुन स्रोतबाट चलिरहेको छ, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन कसले गरिरहेको छ भन्ने कुराहरुतर्फ आन्दोलनकारीले ध्यान नै दिएका देखिदैन ।
हुन त युवा सन्त श्रीनिवासाचार्य नेतृत्वको जुलुस संविधानसभाको मस्यौदा संकलनको काम भइरहँदा इटहरीको रिजालटाँसीमा पुगेर नाराबाजी गरेदेखि नै यो आन्दोलनको सुरुवात भएको हो । ठूला भनिने दलहरुले हिन्दूवादीहरुलाई सुझाव संकलन गर्न सो दिन रिजाल भिजनभित्र प्रवेश गर्न दिएका थिएनन् । सो दिन समेत सामान्य झडप र तोडफोड भएको थियो । रिजाल भिजनको फलामे गेटमा लात्तीले उफ्री उफ्री हान्दै भीडलाई उत्तेजित बनाउने कार्यमा सो बेला समेत श्रीनिवासाचार्य नै देखिन्थे । भलै, सो दिन कुनै अप्रिय घटना भएन । त्यही दिनदेखि सुरु भएको हिन्दूवादीहरुको प्रदर्शन त्यसपछि दिनहुँजसो भइरहेको छ। पहिला शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने भनिएको कार्यक्रम प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको भन्दै एकाएक तोडफोड, बन्दहड्तालमा उत्रिएपछि यसले उग्र रुप लिन थालेको छ । तर आन्दोलनले यस्तो रुप लिनु पछाडिका केही कारणमध्ये रअको चलखेल समेत प्रमुख रहेको स्रोतको भनाई छ ।
भारतीय दूतावासको विराटनगरस्थित क्याम्प अफिसका एक उच्च अधिकृतका अनुसार भारतीय गुप्तचर संस्था रअका पूर्व प्रमुख(हाल प्रतिनिधि) डा. आरपी सिंह इटहरीमा हिन्दूवादीको आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि त्यसमा घिउ थप्ने उद्देश्यले विगत केही समयदेखि आएर विराटनगरमा बसिरहेका छन् । विराटनगरको जेनियल होटेलको १०३ नम्बर कोठामा उनी साउन १ गतेदेखि निरन्तर बसेर त्यहाँबाट इटहरी आन्दोलनको रिमोट चलाइरहेका स्रोतको दाबी छ । सिंह भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीको पालामा रअको प्रमुख थिए । उनी आफूलाई हाल नेपाल भारत मैत्री संघको मान्छे भन्छन् । तर नेपालतर्फको प्रतिनिधि भनेर चिनाइए पनि उनको घर चाहि बिहारको भागलपुरमा हो । सिंहको समन्वयमा आन्दोलनलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोगदेखि लिएर अन्य खालका सहयोगहरु समेत उपलब्ध गराउने काम भइरहेको स्रोतको भनाई छ । सयौ मानिसलाई दिनहुँ पण्डालमा भेला पार्नु, पानी खुवाउनु, माइक तथा टेण्टको भाडा तिर्नु जस्ता सामान्य काम गर्नैलाई मात्र पनि दिनमा २ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । इटहरीमा भइरहेको आन्दोलनको क्रममा हरेक दिन १४० जनाका लागि खाना, जेरी, पुरी तरकारी बन्ने गरेको छ। जसका लागि दैनिक लाख रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ । सो पैसाको स्रोत समेत आन्दोलनकारीहरुले स्पष्ट रुपमा खुलाएका छैनन् । रअ प्रतिनिधि सिंहले पैसाको चिन्ता नगर्न र आन्दोलनलाई टिकाइराख्न र अझ उग्र पार्न विभिन्न प्रतिनिधि पात्रहरुलाई इटहरीमा खटाएका समेत बताइएको छ ।
स्रोतको यो भनाईलाई केही समयअघि मुक्तिनाथ बाबा(कमलनयनाचार्य)ले समेत पुष्टि गरेका थिए । मुक्तिनाथ बाबाको भूमिकालाई निकै पहिलादेखि शंकास्पद रुपमा चर्चामा ल्याउने गरिएको छ । उनै मुक्तिनाथ बाबा इटहरीको आन्दोलनलाई थप उर्जा दिने नाममा पूर्व आएको बेला सुटुक्क विराटनगरको जेनियल होटेल पुगेर रअ प्रतिनिधि सिंहसँग वार्ता समेत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार कमलनयनाचार्यले सिंहसँग करिब ३ घण्टा लामो वार्ता गरेका थिए । उनले सिंहसँग वार्ता गरेपछिका दिनहरुमा चाहि शान्तिपूर्ण आन्दोलनले फरक रुप लिन थालेको स्रोतको दाबी छ । इटहरीको आन्दोलनमा विभिन्न भेष र रुपमा अहिले रअको केही प्रतिनिधिहरुलाई नै खटाइएको समेत स्रोतले बतायो । सिंहको प्रतिनिधिको रुपमा खटिएका तिनै रअ प्रतिनिधिहरुको इशारामा आन्दोलन अघि बढिरहेको स्रोतको दाबी छ । आन्दोलनलाई स्थानीय स्तरमा हाँक्ने भनेर नाम चर्चामा ल्याइएका डा. राजेन्द्र पोखरेलको भूमिकालाई समेत हिन्दूवादीहरुले नै शंकास्पद मान्न थालेका छन् । केही स्रोतहरुले त उनैलाई पनि रअ वा अन्य कुनै अतिवादी समूहले खटाएको हो कि भनेर आशंका गरेका छन् । इटहरीमा मात्र होइन, देशका प्रमुख शहरहरुमा हिन्दूहरुको आन्दोलनलाई हाल रअबाटै लगानी भइरहेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले पनि केही दिनअघि खुलासा गरेका थिए । नेपालकै काठमाण्डौमा रहेका केही पत्रिकाहरुका अनुसार देशैभरका प्रमुख शहरहरुमा भारु खन्याएर हिन्दू धर्मको आडमा रअका प्रतिनिधि नेपाललाई पुनः हिन्दूराष्ट कायम गराउने दौडमा छन् । तर यसरी धार्मिक आन्दोलन, झडप र उग्र गतिविधि भइरहँदा देशमा धार्मिक दन्द वा युद्धको विजारोपण हुने र त्यसले भोलि नेपालीहरुको अमनचयनमै खलल पुरयाउने खतरातर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन ।
इटहरीको आन्दोलनलाई विराटनगरमा बसेर सिंहले चलाइरहेका कुरा प्रहरीले समेत पुष्टि गरेको छ । पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयस्थित स्रोतका अनुसार विराटनगरको जेनियल होटेलमा बसेका सिंह दैनिकजसो हिन्दूवादीहरुसँग छलफलमा जुट्ने गरेका छन् । उनले कतिपय नेताहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा नै बाँडेका सूचना आफ्ना गुप्तचरहरुले संकलन गरेका प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।
प्रहरी र सेनाले गरेको अनुसन्धानको क्रममा रअको प्रतिनिधि रुपमा जेनियल होटेलमा बसेर रिमोट चलाइरहेका डा. सिंह, हिमानी टष्टका असली प्रतिनिधिको रुपमा रहेका पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कट्वाल, कमलनयनाचार्य र इटहरीमा आन्दोलन हाँकिरहेका श्रीनिवासाचार्यबीच पटक पटक दोहोरो, तेहेरो र दैनिक घण्टौ टेलिफोन वार्ता भएको समेत भेटिएको छ । प्रहरी तथा सेनाले गोप्य रुपमा टेलिफोनको डिटेल गृह र रक्षा मन्त्रालयमा पेश गरी इटहरीको आन्दोलनमा रअको लगानी रहेको रिपोर्ट नै पेश गरेका समेत सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा भन्दा इटहरीमै हिन्दूवादीको आन्दोलन चर्किनुको अर्को कारण हिमानी ट्रष्टको स्वार्थ समेत जोडिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । हिमानी ट्रष्टको सुनसरीमा खासै प्रभावकारी उपस्थिति छैन । आन्दोलनको क्रममा हिन्दूवादीलाई एकैठाउँमा भेला पारी हिमानी ट्रष्टलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने डिजाइन अन्तरगत समेत आन्दोलन टिकिरहेको स्रोत बताउँछ । प्रहरी र सेनाले गरेको अनुसन्धानको क्रममा रअको प्रतिनिधि रुपमा जेनियल होटेलमा बसेर रिमोट चलाइरहेका डा. सिंह, हिमानी टष्टका असली प्रतिनिधिको रुपमा रहेका पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कट्वाल, कमलनयनाचार्य र इटहरीमा आन्दोलन हाँकिरहेका श्रीनिवासाचार्यबीच पटक पटक दोहोरो, तेहेरो र दैनिक घण्टौ टेलिफोन वार्ता भएको समेत भेटिएको छ । प्रहरी तथा सेनाले गोप्य रुपमा टेलिफोनको डिटेल गृह र रक्षा मन्त्रालयमा पेश गरी इटहरीको आन्दोलनमा रअको लगानी रहेको रिपोर्ट नै पेश गरेका समेत सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।
अर्कोतर्फ इटहरी क्षेत्रमा राजावादी र हिन्दूवादी पार्टी राप्रपा नेपालको राम्रो पकड रहेकोले समेत यहाँको आन्दोलनले ठूलो रुप लिइरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन । तर पछिल्लो समय राप्रपा नेपालका केही स्थानीय नेता चाहि रअको चलखेलको गन्ध पाएपछि आन्दोलनबाट टाढिदै गएका छन् । रअको चलखेल र लगानीको सुईको पाएका केही नेताहरुले त जारी आन्दोलनको तत्काल स्वरुप परिवर्तन नगरे यसको परिणाम नकारात्मक हुनसक्नेसम्मको चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । यसको अर्थ, आन्दोलनकारीमै पनि विभाजनको बिजारोपण भइसकेको छ । त्यसो त बिल्कुल धार्मिक भनिएको अभियान तथा प्रदर्शनको क्रममा संविधान मस्यौदा धोका हो, राजा आऊ देश बचाऊ जस्ता नारा पनि लागेका थिए । यसबाट समेत धर्मको आडमा राजावादीहरुले टाउको उठाउन खोजेका स्पष्ट देखिन्छ । राजाको कुरा छाडेर हिन्दू राष्ट पुनस्थापनाको एकसूत्रीय नारा मात्र बुलन्द भएको भए अहिले इटहरीको आन्दोलनले परिणाममुखी आकार ग्रहण गरिसक्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
के निहुँ पाऊ, कनिका पोखाऊ भनेर मौका हेरेर बसेको रअ जस्तो गुप्तचर संस्थालाई नै सहयोग हुने गरी इटहरी प्रहरीले समेत जथाभावी लाठी बर्साउँदा समस्या अझ विकराल बन्दै गएको देखिन्छ । केही दिनअघिको प्रदर्शनमा इटहरीका प्रहरीका जिम्मेवार पुरुष अधिकारीहरुले नै वृद्धा तथा महिलाहरुलाई हात लगाएर धकेलेको, सर्वसाधारण प्रदर्शनकारीलाई जथाभावी लाठी र झापड हानेको दृश्यले समेत धेरै हिन्दूवादीहरुलाई उत्तेजित बनाएको देखिन्छ । यी दृश्यहरु टिभीमा हेरेका सर्वसाधारण समेत आन्दोलनमा सरिक हुन थालेका पाइएको छ । तर सुरुवातका दिनमा आन्दोलनमा जुन किसिमको जनसागर उर्लिएको थियो, त्यो घट्दै गएका कारण रअकै प्रतिनिधि समेत आफ्नो लगानी खेर जाने पीरमा परेको स्रोत बताउँछ । त्यसो त सो दिन गरेको आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरी महायज्ञ संचालन भइरहेको क्षेत्रमै पुगेर डिएसपी विनोद शर्माले प्रहरीको तर्फबाट माफी मागिसकेका छन् । तर, उनले माफी मागे पनि आन्दोलन संयमित र जिम्मेवार चाहि भएको छैन । आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरुले बन्दहड्ताल मात्रै आन्दोलनको एकमात्र र अन्तिम माध्यम हो भन्ने गलत कुरा बुझेका र कतैबाट परिचालित भएर त्यही काम गरेका कारण समस्या विकराल बन्दै गएको देखिन्छ । अझ आफ्नो अधिकारको बिषयमा चर्का नाराबाजी गर्ने आन्दोलनकारीहरुले अर्काको अधिकार कुण्ठित हुनुलाई सामान्य मान्दा समेत समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । हरेक दिन मुख्यचौक र आसपासमा घण्टौ बन्द गर्दा त्यसले सर्वसाधारणको आवातजावत असहज हुने, टाफिक व्यवस्थापन चौपट हुने, चौक आसपासको व्यापार व्यवसाय टाट पल्टने सामान्य कुराप्रति समेत आन्दोलनकारीले ध्यान दिएका देखिदैन । स्रोतका अनुसार यस्ता कुरामा ध्यान दिनेहरुलाई आन्दोलनको नेतृत्व तहमा राखिएको छैन, यो काम पनि सुनियोजित ढंगले भएको छ ।
त्यसो त इटहरी प्रहरीले समेत आवश्यक संयमता नअपनाएको देखिन्छ । एक्कासी ठोकिहाल्ने प्रवृतिले समेत समस्या निम्त्याइरहेको छ । प्रहरीको लाठी प्रहारबाट दर्जनौको शरीरमा चोटपटक लागेका छन् । उनीहरुलाई ती चोटपटक देखाउन लगाउँदै थप सर्वसाधारण बटुल्ने र प्रहरीले दमन गरेको आरोप लगाउँदै हिन्दूवादीहरुको सहानुभूति लिएर आन्दोलनलाई थप उग्र बनाउने आन्दोलनकारीका नेताहरुको तयारी रहेको बुझिएको छ । अर्कोतर्फ आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेका भनिएका श्रीनिवासाचार्य बाहेक केही भूपू प्रहरी र प्रशासनका कर्मचारीले समेत घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन् । तर आन्दोलनलाई व्यवस्थित ढंगले नेतृत्व गर्ने र अराजक बन्न नदिनेतर्फ प्रभावकारी काम गर्ने कुनै पनि नेतृत्व प्रकट भएको देखिएन ।
डा. केसीबाट सिक
माग पूरा गराउन आन्दोलन गर्दा बन्दहड्ताल, अर्काको सम्पत्तिमा क्षति गर्नुपर्छ र अराजक शैलीमै प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरा अब संकीर्ण र मूर्खहरुको तर्क झै भइसक्यो । फेरि हिन्दू सनातन धर्मले कहिल्यै पनि अर्काको सम्पत्तिमाथि क्षति पुरयाउनु, अरुलाई पीडा वा सकस दिनुलाई धर्म भन्दैन, पाप नै भनी परिभाषित गरेको छ । बन्द तथा हड्तालबाट अघाइसकेका नेपाली जनतालाई सकस हुने गरी बन्दहड्तालकै हतियार प्रयोग गर्नु नै हिन्दू तथा धर्मगुरु र उनका प्रभूहरुको ठूलो गल्ती हो। आन्दोलनका शान्तिपूर्ण अन्य रुपहरु पनि छन्, त्यस्ता रुपहरुलाई चाहि कार्यान्वयनमा ल्याइए त्यसले आवश्यक समर्थन पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । इटहरीका आन्दोलनकारी र तिनका नेतृत्वकर्ताहरुले मेडिकल क्षेत्रको विकृति हटाउनका लागि एक्लै आन्दोलन गर्ने डा. गोविन्द केसीबाट सिक्न जरुरी छ । डा. केसीको भोकहड्तालकै कारण मै हुँ भन्ने नेताहरुले मेडिकल कलेजमा गरेको अरबौको लगानी अहिले धरापमा परेका छ भने मेडिकल कलेजको नाममा हुर्किरहेको विकृति सरकारले काटछाँट गर्न थालेको छ। शान्तिपूर्ण अनशन, धर्ना, प्रदर्शनमा पनि उत्तिकै दम हुन्छ भन्ने कुरा डा. केसीबाट सिकी इटहरीमा त्यस्तै कार्यक्रम संचालन गर्न सकिए मात्र अन्य दलका समर्थक र हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका हिन्दूवादीहरुलाई समेत तान्ने वातावरण बन्न सक्छ । होइन भने स्रोतको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने रअकै लगानीमा आन्दोलन अझ अराजक भइरहन्छ र अप्रिय घटनाको प्रतिक्षा गर्दै हरेक दिन इटहरी उकुसमुकुस बन्नुपर्नेछ । जब कुनै अप्रिय घटना भइदिन्छ, त्यसबेला मात्र सरोकारवालाहरुको आँखा खुलेको अर्थहीन हुनेछ ।
Taken From: http://www.bizshala.com
राजनीति | सोमबार, २५ साउन २०७२ | Monday, 10 2015 | Biz Reporter
बरिस्ठ पत्रकार किशोर पन्थीका सरल तर भावपूर्ण जिज्ञाशाहरुमा प्रोफेसर डाक्टर तुल्सी धरेलले के भने?
मंगलबार १ बजेबाट कांग्रेस महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यको मतगणना